काठमाडौँ, ३ चैत । आर्थिक समृद्धिको अभियानलाई अझै सन्तुलित बनाउने गरी सरकारले आयोजना गर्न लागेको लगानी सम्मेलनमा ६३ वटा विकास आयोजनाको प्रस्ताव सूची पेश गर्ने भएको छ । लगानी बोर्डले… बाँकी »
पुँजी बजारका लागनीकर्ताहरुले एक वर्षमा २ खर्ब ३७ अर्ब गुमाए
काठमाडौं, ३ चैत । पुँजी बजारका लागनीकर्ताहरुले एक वर्षको अवधिमा २ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ गुमाएका छन् । गत आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को ७ महिनामा सेयर बजारको पुँजीकरण १६ खर्ब… बाँकी »
‘औधोगीक व्यवसाय ऐन–२०७५’ लाई संशोधन गर्ने तयारीमा सरकार
काठमाडौं । सरकारले ‘औधोगीक व्यवसाय ऐन–२०७५’ लाई संशोधन गर्न बनेको विद्येयक संसदमा पेश गर्न स्वीकृत दिएको छ । बिहीबार मन्त्रिपरीषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले बताएका छन् ।… बाँकी »
शेयर बजारमा दोहोरो अंकको सुधार, तामाकोशीको मूल्य ५ रुपैयाँ बढ्यो
काठमाडौंः शेयर बजारमा दोहोरो अंकको सुधार भएको छ। शेय बजार परिसुचक नेप्से १४ अंकले बढेर ११ सय ४२ मा पुगेको छ। सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि ३ अंकले बढेर २ सय ४३… बाँकी »
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाद्वारा साना किसान सम्मेलनलाई सम्बोधन
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कृषि कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न स्थानीय सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । अर्थमन्त्री खतिवडाले सरकारले किसानको माझमा सेवा र सुविधा पुर्‍याउन कृषिसम्बन्धि सम्पूर्ण… बाँकी »
काठमाडौं, ८ फागुन । सरकारले विदेशी ऋण लगानीमा सञ्चालन हुने पाँच प्रकारका विकासे परियोजनालाई हेजिङ सुविधा प्रदान गरेको छ। हेजिङसम्बन्धी नियमावली २०७५ मार्फत यस्तो सुविधा प्रदान गरिएको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकका… बाँकी »
काठमाडौं । झुठा विवरण तथा नक्कली बिजक जारी गरेर राजश्व छलेको भन्दै बीरगञ्ज आसपासमा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका ३३ जना व्यवसायी विरुद्ध राजश्व अनुसन्धान विभागले छानविन थालेको छ । प्रारम्भिक छानविनमा… बाँकी »
उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुहोस्, ब्याजदरमा लचिलो हुनुहोस् : प्रम ओली
काठमाडौ, ५ फागुन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैंकहरुलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्न ब्याजदरमा लचिलो हुन आग्रह गर्नुभएको छ ।नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधीहरुलाई आज बालुवाटरमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले… बाँकी »
काठमाडौं–सेयर बजारमा लगानी गर्न चाहनुहुन्छ भने आइपीओ खरिद गर्न तयार रहनुस् । प्रतिकित्ता सय रुपैयाँ अंकित दरले ३ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बराबरको आइपीओ निष्काशन हुँदैछ । नेपाल धितोपत्र बोर्डमा… बाँकी »
कञ्चनपुरमा फेरि भेटियो अर्को साढे ५ किलो सुन
महेन्द्रनगर– कञ्चनपुरमा फेरि साढे ५ किलो सुन बरामद भएको छ । बिहीबार दिउँसो ११ बजे पुनर्वासबाट प्रहरीले १८ किलो सुन बरामद गरेको थियो । प्रहरीले बिहीवार राति नै कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा… बाँकी »